Amaqela kaMicrosoft eMacOS ahlaziywa ngeendaba ezibalulekileyo | Ndisuka mac
Sinohlaziyo olutsha kwinkqubo yamaQela kaMicrosoft. Emva kohlaziyo lwamva nje olubandakanya ukuphuculwa kokusebenza kwesicelo, ngoku kwakhona, iMicrosoft iphinde yahlaziya usetyenziso lweMacOS. Ngeli xesha kunye Inkxaso yokwabelana ngesandi senkqubo nabanye. Kwangelo xesha, iMicrosoft iqinisekisile ukuba uhlaziyo lwamva luzakwenza izaziso zemveli kuhlobo lwe-macOS losetyenziso
Ngexesha lobhubhane, iintlanganiso ezibonakalayo bezisoloko ziqhelekile. Ngesi sizathu, onke amaqonga ebesazisa ukuphucuka kwizicelo zawo. Amaqela eMicrosoft awekho ngaphantsi kwaye ubeke iibhetri ngohlaziyo olufanayo lweMacOS. Ukuba kutsha nje ihlaziyiwe ukubandakanya ukuphucula ukusebenza, ngoku ifake inkxaso yokwabelana ngeaudiyo yenkqubo nabanye. Kodwa le nto ayipheleli apho.
Olu phawu lokwabelana ngomsindo belunqweneleka kakhulu kwaye lulindelwe ngabasebenzisi beMac.Bebelinde inqaku ixesha elide, njengoko uguqulelo lweWindows lweMicrosoft Teams luhlala lunolu khetho. Ewe umsebenzisi unokukhetha ukuba abelane ngescreen ngesandi okanye hayi. Ngokusisiseko lo msebenzi mtsha uza kuvumela abanye abantu ukuba bamamele isandi sesandi esidlalwa kwiMacBook xa wabelana ngescreen. Nje ukuba yenziwe, unako dlala iiklip zeaudio okanye zevidiyo kwisixhobo sakho kunye nokuvumela abanye abantu ukuba beve isandi sale nkqubo, eya kuba luncedo kakhulu kwiiklasi nakumashishini.
UMicrosoft uqinisekisile ukuba inkxaso ye Izaziso zesonka samaNzululwazi kumaQela iyakwenziwa ukuba isebenze kwi-macOS ngohlaziyo lwexesha elizayo. Inkampani iqale ukukhupha izaziso zemveli Windows 10 abasebenzisi kwangoko kule nyanga, kwaye inqaku kulindeleke ukuba lifike kwi-Mac kungekudala. Ndiyathemba ukuba akukho mfuneko yokuba silinde ixesha elide ukuba sibe sisandi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Amaqela kaMicrosoft eMacOS ahlaziywa ngeendaba ezibalulekileyo
Ukuphononongwa kokuqala kwee-AirTag kubonakala